4 Underrated Places In Europe tichironga By Train | Save A Train
musha > Train Travel Holland > 4 Underrated Places In Europe tichironga By Train
Nokuti vose vanoshingaira vafambi kunze uko vari kutsvaka nzvimbo muEurope tichironga nechitima nokuti zviri nani vanogamuchira kwataiitwa mabayo njanji kufamba pane ndege, pano chimedu nhau kwauchaita rudo. European chitima nzendo makatasva zuva mumwoyo mumaguta makuru, kubvumira kuti kuwana zvishamiso muEurope without breaking the bank while enjoying the unique experience of a train ride.
Here are some great nzvimbo Europe tichironga nechitima:
Izvi nechitima tasva inogara inenge 5 maawa uye mari iwe anenge £ 168 kuti kudzoka tikiti. Kana uri une wechipiri pfungwa pamusoro kushanyira France, pano chikonzero uchifanira akadonhedza kuti maonero. Get kwenyu chitima tikiti arongwe uye vanoenda vakananga Vakamupfekedza nyika ino. First kure, Vakadzi French zvakachena. Chepiri, zvokudya wakanaka, uye waini ndiko zvose vanoti zviri - anodhura asi zvakakodzera. Nyika kuti kubudirira anoroorwa Gallic inowana German ndeyokugara kure chimwe chezvinhu zvinoshamisa zvakaitika uchafarirwa. kuona hwose. Ose Places mu Europe tichironga By Train, Strasbourg achava nemi vanoziya, uye unenge nokutora selfies pamberi nakisa kunoshamisa Strasbourg chechi.
Antwerp kuna muStrasbourg Zvitima
Anobatirira bhuku zvauchasangana uchida kuverenga inenge 5.30 Maawa nekuti ndizvo sei nguva yakareba mukatora iwe kusvika Cologne. Kuti tipindure mubvunzo wako pakarepo: ehe, unenge kuchinja nezvitima muna kweBrussels. Kudzoka tikiti kunodyira £ 177, asi zvakakodzera. Sei? Nekuti ichi ndicho, pasina mubvunzo, guta rainyanya rikwezve muGermany; regally agere pamahombekombe Rhine, Cologne anotarira chinoshamisa munyika yose gore. Uri Foodie? Uchaita kuda eateries achitevedza waterside zvuva pamusoro Am Frankenturm! wo, tarisa miziyamu Ludwig kuti aitarire wakanaka ano unyanzvi.
Vienna kuna Cologne Zvitima
Stuttgart kuna Cologne Zvitima
ReRotterdam ndomumwe yakanakisisa akakwirira Europe tichironga nechitima. Muchava kuchovha nokuti anenge mana kwemaawa, uye achava kuchinja nezvitima muna kweBrussels. Haufaniri kupedza pamusoro £ 185 uri kudzoka tikiti. ReRotterdam kare wakaitwa asina mukurumbira imwe mhando nokuda kwayo gritty chengarava chinhu asi Cranes uye kutumirwa midziyo. Recently, zvinonzi kuzunza kuti mukurumbira uye kuwana vashanyi kuti kuona chiedza zvachose itsva ive. nguva ino kumativi, uchaita kuda guta nokuda kwayo zvinoyevedza pfuma yemashoko, the Museum Boijmans Van Beuningen which “which runs the gamut from Brueghel the Elder to Salvador Dali.” Pane zvakawanda kuona uye ruzivo pano, uye kuti ReRotterdam riri kuitwa rails inongova imwe ndinoiitawo.
Pamusoro pe, munzira imomo muchaona akakurumbira AND tulip minda, ichi zvechokwadi kuwana kuti guta vibe huru.
Our okupedzisira Sarudza musi “Places mu Europe tichironga By Train” ndizvo – Antwerp (Bherujiyamu)
The inoita dzekuendesa Antwerp ndeyokuita vanofambira maawa anenge mana nechitima uye kuchinja nezvitima muna kweBrussels. hamungambovi mari pamusoro £ 87 kuti kudzoka tikiti inova incredible. Pasinei kwayo shamisa nzvimbo (guta riri pamuganhu pakati Belgium uye Netherlands), Antwerp ndiye, vasinganzwisisiki zvakakwana, nakisa nyore nechitima. Unogona kunyange kutenga imwe "Chero muBelgian Station" tikiti kuburikidza Eurostar uye vawane pose munyika, Antwerp zvaisanganisira - panguva chete mutengo sezvo motokari kuna kweBrussels. Antwerp achava kunakidza chaizvo nekuti vadikani zvose nedhaimani: Antwerp, Belgium prides pamusoro wayo Diamond District iyo Unozviti guta apo mamwe asina okukohwa, makorari, uye basa mangoda / anokosha kutora nzvimbo.
Breda kuna Antwerp Zvitima
KuCologne Antwerp Zvitima
Contact Save A Train kuti bhuku rako chitima rwendo kunzvimbo muEurope tichironga nechitima uye isu Achabvisira iwe chero zvinodhura Réservation yechikoro, kuoma Réservation nzira, uye hazviiti rate. Tine iwe vakafukidza danho ose munzira. uye, kamwe zvose arongwe – Ivai nechokwadi kuti imi unakidzwe chitima Vatasvi uye rwendo, tora yakawanda mapikicha uye ngatirambei munoziva zvinhu zvose vakaenda!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F4-underrated-places-in-europe-reachable-by-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#rotterdam antwerp strasbourg chitima mazano travelcologne